လိင်မှတဆင့်ကူးဆက်နိုင်တဲ့ ရောဂါများ – Gentleman Magazine
STD လို့ခေါ်တဲ့ လိင်ကူးစက်ရောဂါတွေဟာ ဘယ်လို လိင်ဆက်ဆံမှု ပုံစံကမဆို ( Oral, Anal, Normal ) ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ STD တွေနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး လွဲမှားတဲ့ အယူအဆတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ တချို့သူတွေကတော့ တစ်လင်တစ်မယားပဲမို့ ရောဂါမရှိဘူးလို့ ယူဆလို့ရပေမယ့် တချို့ အခြားသူတွေကို ရောဂါမရှိဘူးလို့ ယူဆဖို့ကတော့ စောလွန်းနေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒိရောဂါတွေက အသက်အန္တရာယ် မထိခိုက်နိုင်ပဲ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လဲ ဖြစ်မနေပါဘူး။ ယောက်ျားတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ လိင်ကူးစက်ရောဂါ ၈ မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Chlamydia ဟာ ဘက်တီးရီးယား လိင်ကူးစက်ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အတွေ့ရအများဆုံး လိင်ကူးစက်ရောဂါ တစ်ခု ဖြစ်ပြီး တချို့တွေမှာ ရောဂါ လက္ခဏာ မတွေ့ရတဲ့အပြင် တွေ့ရသူတွေမှာလဲ လက္ခဏာပြဖို့ ရက်သတ္တပါတ်ပေါင်းများစွာ ကြာတတ်ပါတယ်။ Chlamydia ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ ဆီးသွားစဉ် နာကျင်ခြင်း၊ လိင်တံ မှ အရည်ထွက်ခြင်းနဲ့ ဝှေးစေ့ ဖောင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြသနာကတော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပျောက်သွားရင်တောင် ပိုးကျန်နေခဲ့ပြီး ဆက်ဆံသူကို ကူးစေမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် ဖြစ်ဖြစ်ခြင်း ဆရာဝန်ပြတာ အကောင်းဆုံးပါ။
ဂနိုလို့ လူသိများတဲ့ ကာလသားရောဂါဟာ စအို၊ လည်ချောင်းနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှု လိင်ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုပါ။ ရောဂါရှိတဲ့ ယောက်ျားအများစုမှာ လက္ခဏာမပြပေမယ့် တချို့မှာတော့ ဆီးသွားစဉ်နာခြင်း၊ လိင်တံမှ အစိမ်း၊ အဖြူ၊ အဝါရောင် အရည်ကျခြင်း၊ ဝှေးစေ့ဖောင်းခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဂနိုရောဂါဟာ Chlamydia နဲ့ ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး နှစ်ခုတူတူ ဆေးတစ်မျိုးထဲ ကုသလို့ရပါတယ်။
ဒီရောဂါရှိတဲ့ ယောက်ျားမိန်းမ အများစုဟာ လက္ခဏာ မပြကြပဲ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရောဂါရှိမှန်းတောင် မသိကြပါဘူး။ တစ်ချို့တစ်လေတော့ ဆီးလမ်းကြောင်း နာခြင်း၊ ယားခြင်းနဲ့ အရည်ကျခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
HIV ဟာ လူတွေ အကြောက်ဆုံး STD တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဖြစ်လဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ လိင်ကိစ္စအပြင် ဆေးထိုးအပ် မျှဝေသုံးခြင်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မှ ကလေးအား ကူးစက်ခြင်းတို့လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီ ဗိုင်းရပ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကူးစက်ပြီး ၁၀ နှစ်အတွင်း ဖောက်ပြန်စေပါတယ်။ ပိုးကူးစက်ပြီး နှစ်ပါတ်မှ လေးပါတ်အကြာမှာ အဖျား၊ တုပ်ကွေးလို လက္ခဏာ ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ခုခေတ်မှာ ပိုးပွားများမှုကို ရပ်ဆိုင်းပစ်နိုင်ပြီး လူကောင်းတစ်ယောက်လို နေနိုင်စေမယ့် ဆေးဝါးတွေ ပေါ်နေပါပြီ။
ရေယုန်ဗိုင်းရပ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ နာကျင်တဲ့အနာတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုမှ ကူးစက်တတ်ပြီး တခြား လိင်ကူးစက်ရောဂါတွေလိုပဲ လက္ခဏာ မပြပဲ မြုံနေတာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေမှာဆို လိင်အင်္ဂါ၊ တင်ပါး၊ ခြေလက်အရေပြား၊ စအို၊ စအိုအတွင်းပိုင်းတို့မှာ ဖြစ်တတ်ပြီး ပါးစပ်မှာ ဖြစ်တဲ့ ရေယုန်ကတော့ နမ်းခြင်းဖြင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ရေယုန်ဗိုင်းရပ်ဟာ ကုသလို့ မရနိုင်ပဲ တစ်သက်လုံး ရှိနေမှာ ဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးနဲ့ မပျံ့အောင်တော့ ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
၆. Genital Warts
တချို့ မှက္ခရု တွေဟာ STD ရောဂါတွေကြောင့် ဖြစ်ပေမယ့် တချို့ကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံမှုနိုးကြားတဲ့ လူတွေရဲ့ ၇၅ ရာနှုန်းမှာ မှက္ခရုတွေ ရှိနေတယ် ဆိုပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ စအို၊ လိင်တံအပေါ်မှာ ပျော့တဲ့ အသားဖုလေးတွေ အဖြစ် စတင် ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ကာကွယ်ဆေး၊ ကုသဆေးတွေ ရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကလဲ သူ့ဘာသာ ကုသနိုင်ပါတယ်။
၇. အသည်းရောင်အသားဝါ B
တခြား STD တွေလို လိင်အင်္ဂါနားမှာ ရောဂါလက္ခဏာ ပြတာမဟုတ်ပဲ အသည်းရောင်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်ဖြစ်လို့ အန္တရာယ် ကြီးပါတယ်။ ရောဂါရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ထွက်တဲ့ အရည်တွေနဲ့ ထိတွေ့လိုက်ရုံနဲ့ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါ လက္ခဏာတွေကတော့ အစားစားချင်စိတ် ပျောက်ခြင်း၊ အဖျားပျော့ ဖျားခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ကြွက်သား အဆစ်အမြစ် နာခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ ဆီးမည်းနက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆစ်ဖလစ်ရောဂါဟာ ဘက်တီးရီးယား STD တစ်ခုပါ။ ဆစ်ဖလစ်မှာ အဆင့်လေးဆင့်ရှိပြီး ပထမ အဆင့်မှာ မကုသရင် ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ တခြားအင်္ဂါတွေကို ကူးစက်သွားပါတယ်။ အဲဒိအဆင့်ပြီးရင် ကာလရှည် ဝေဒနာခံစားရမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ဦးနှောက်ကို ကူးစက်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံ၊ အကြားအာရုံ ပျောက်ဆုံးခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆစ်ဖလစ်ကို ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ ကုသလို့ ရပါတယ်။
သင် ညဘက် အဖော်တစ်ယောက်နဲ့ အိပ်ရာဝင်ရင် ဒီရောဂါတွေကို သင် မစဉ်းစားချင်ဆုံး ဖြစ်မှာပါ။ နောက်ကျ ကိစ္စမရှုပ်ရအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ကွန်ဒုံး ဆောင်ထားပါ။
သင်ဟာ လိင်ကိစ္စတက်ကြွသူတစ်ယောက်ဆိုရင် ခြောက်လတစ်ခါ ဖော်ပြပြီးရောဂါတွေကို စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင့်မှာ ဆက်ဆံဖက် တစ်ယောက်ထက်ပိုရင်ပါ။ အဖော်ဆောင်ထားဖို့လဲ သတိရပါ။
ယောကျြားတိုငျးသိသငျ့တဲ့ လိငျကူးစကျရောဂါ ၈ မြိုး
STD လို့ချေါတဲ့ လိငျကူးစကျရောဂါတှဟော ဘယျလို လိငျဆကျဆံမှု ပုံစံကမဆို ( Oral, Anal, Normal ) ကူးစကျနိုငျပါတယျ။ STD တှနေဲ့ ပါတျသတျပွီး လှဲမှားတဲ့ အယူအဆတှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ တခြို့သူတှကေတော့ တဈလငျတဈမယားပဲမို့ ရောဂါမရှိဘူးလို့ ယူဆလို့ရပမေယျ့ တခြို့ အခွားသူတှကေို ရောဂါမရှိဘူးလို့ ယူဆဖို့ကတော့ စောလှနျးနပေါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒိရောဂါတှကေ အသကျအန်တရာယျ မထိခိုကျနိုငျပဲ ပျေါပျေါထငျထငျလဲ ဖွဈမနပေါဘူး။ ယောကျြားတိုငျး သိထားသငျ့တဲ့ လိငျကူးစကျရောဂါ ၈ မြိုးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
Chlamydia ဟာ ဘကျတီးရီးယား လိငျကူးစကျရောဂါ တဈမြိုး ဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ အတှရေ့အမြားဆုံး လိငျကူးစကျရောဂါ တဈခု ဖွဈပွီး တခြို့တှမှော ရောဂါ လက်ခဏာ မတှရေ့တဲ့အပွငျ တှရေ့သူတှမှောလဲ လက်ခဏာပွဖို့ ရကျသတ်တပါတျပေါငျးမြားစှာ ကွာတတျပါတယျ။ Chlamydia ရဲ့ ရောဂါလက်ခဏာတှကေတော့ ဆီးသှားစဉျ နာကငျြခွငျး၊ လိငျတံ မှ အရညျထှကျခွငျးနဲ့ ဝှေးစေ့ ဖောငျးခွငျးတို့ ဖွဈပါတယျ။ ပွသနာကတော့ ရောဂါလက်ခဏာတှေ ပြောကျသှားရငျတောငျ ပိုးကနျြနခေဲ့ပွီး ဆကျဆံသူကို ကူးစမှောပါ။ အဲဒါကွောငျ့ ဖွဈဖွဈခွငျး ဆရာဝနျပွတာ အကောငျးဆုံးပါ။
ဂနိုလို့ လူသိမြားတဲ့ ကာလသားရောဂါဟာ စအို၊ လညျခြောငျးနဲ့ ဆီးလမျးကွောငျးကို ထိခိုကျတဲ့ ဘကျတီးရီးယားကူးစကျမှု လိငျကူးစကျရောဂါတဈခုပါ။ ရောဂါရှိတဲ့ ယောကျြားအမြားစုမှာ လက်ခဏာမပွပမေယျ့ တခြို့မှာတော့ ဆီးသှားစဉျနာခွငျး၊ လိငျတံမှ အစိမျး၊ အဖွူ၊ အဝါရောငျ အရညျကခြွငျး၊ ဝှေးစဖေ့ောငျးခွငျးတို့ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဂနိုရောဂါဟာ Chlamydia နဲ့ ပူးတှဲဖွဈပျေါတတျပွီး နှဈခုတူတူ ဆေးတဈမြိုးထဲ ကုသလို့ရပါတယျ။
ဒီရောဂါရှိတဲ့ ယောကျြားမိနျးမ အမြားစုဟာ လက်ခဏာ မပွကွပဲ သူတို့ကိုယျသူတို့ ရောဂါရှိမှနျးတောငျ မသိကွပါဘူး။ တဈခြို့တဈလတေော့ ဆီးလမျးကွောငျး နာခွငျး၊ ယားခွငျးနဲ့ အရညျကခြွငျးတို့ ဖွဈတတျပါတယျ။
HIV ဟာ လူတှေ အကွောကျဆုံး STD တဈခု ဖွဈပွီး ဖွဈလဲ ဖွဈသငျ့ပါတယျ။ လိငျကိစ်စအပွငျ ဆေးထိုးအပျ မြှဝသေုံးခွငျးနဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျမှ ကလေးအား ကူးစကျခွငျးတို့လဲ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီ ဗိုငျးရပျဟာ ခန်ဓာကိုယျခံအားစနဈကို ကူးစကျပွီး ၁၀ နှဈအတှငျး ဖောကျပွနျစပေါတယျ။ ပိုးကူးစကျပွီး နှဈပါတျမှ လေးပါတျအကွာမှာ အဖြား၊ တုပျကှေးလို လက်ခဏာ ပျေါတတျပါတယျ။ ခုခတျေမှာ ပိုးပှားမြားမှုကို ရပျဆိုငျးပဈနိုငျပွီး လူကောငျးတဈယောကျလို နနေိုငျစမေယျ့ ဆေးဝါးတှေ ပျေါနပေါပွီ။
ရယေုနျဗိုငျးရပျဟာ ခန်ဓာကိုယျမှာ နာကငျြတဲ့အနာတှေ ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ လိငျဆကျဆံမှုမှ ကူးစကျတတျပွီး တခွား လိငျကူးစကျရောဂါတှလေိုပဲ လက်ခဏာ မပွပဲ မွုံနတော ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ယောကျြားတှမှောဆို လိငျအင်ျဂါ၊ တငျပါး၊ ခွလေကျအရပွေား၊ စအို၊ စအိုအတှငျးပိုငျးတို့မှာ ဖွဈတတျပွီး ပါးစပျမှာ ဖွဈတဲ့ ရယေုနျကတော့ နမျးခွငျးဖွငျ့ ကူးစကျနိုငျပါတယျ။ ရယေုနျဗိုငျးရပျဟာ ကုသလို့ မရနိုငျပဲ တဈသကျလုံး ရှိနမှော ဖွဈပွီး ဆေးဝါးနဲ့ မပြံ့အောငျတော့ ထိနျးထားနိုငျပါတယျ။
တခြို့ မှက်ခရု တှဟော STD ရောဂါတှကွေောငျ့ ဖွဈပမေယျ့ တခြို့ကတော့ မဟုတျပါဘူး။ လိငျဆကျဆံမှုနိုးကွားတဲ့ လူတှရေဲ့ ရ၅ ရာနှုနျးမှာ မှက်ခရုတှေ ရှိနတေယျ ဆိုပါတယျ။ သူတို့တှဟော စအို၊ လိငျတံအပျေါမှာ ပြော့တဲ့ အသားဖုလေးတှေ အဖွဈ စတငျ ဖွဈပျေါလာတာပါ။ ကာကှယျဆေး၊ ကုသဆေးတှေ ရှိပွီး ခန်ဓာကိုယျ ကိုယျတိုငျကလဲ သူ့ဘာသာ ကုသနိုငျပါတယျ။
၇. အသညျးရောငျအသားဝါ B
တခွား STD တှလေို လိငျအင်ျဂါနားမှာ ရောဂါလက်ခဏာ ပွတာမဟုတျပဲ အသညျးရောငျစတေဲ့ ဗိုငျးရပျဖွဈလို့ အန်တရာယျ ကွီးပါတယျ။ ရောဂါရှိတဲ့ လူတဈယောကျရဲ့ ခန်ဓာကိုယျက ထှကျတဲ့ အရညျတှနေဲ့ ထိတှလေို့ကျရုံနဲ့ ကူးစကျနိုငျပါတယျ။ ရောဂါ လက်ခဏာတှကေတော့ အစားစားခငျြစိတျ ပြောကျခွငျး၊ အဖြားပြော့ ဖြားခွငျး၊ အော့အနျခွငျး၊ ဝမျးလြှောခွငျး၊ ကွှကျသား အဆဈအမွဈ နာခွငျး၊ အသားဝါခွငျး၊ ဆီးမညျးနကျခွငျးတို့ ဖွဈပါတယျ။
ဆဈဖလဈရောဂါဟာ ဘကျတီးရီးယား STD တဈခုပါ။ ဆဈဖလဈမှာ အဆငျ့လေးဆငျ့ရှိပွီး ပထမ အဆငျ့မှာ မကုသရငျ ဒုတိယအဆငျ့အနနေဲ့ တခွားအင်ျဂါတှကေို ကူးစကျသှားပါတယျ။ အဲဒိအဆငျ့ပွီးရငျ ကာလရှညျ ဝဒေနာခံစားရမှာ ဖွဈပွီး နောကျဆုံးအဆငျ့မှာ ဦးနှောကျကို ကူးစကျခွငျး၊ အမွငျအာရုံ၊ အကွားအာရုံ ပြောကျဆုံးခွငျးတို့ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဆဈဖလဈကို ပဋိဇီဝဆေးတှနေဲ့ ကုသလို့ ရပါတယျ။
သငျ ညဘကျ အဖျောတဈယောကျနဲ့ အိပျရာဝငျရငျ ဒီရောဂါတှကေို သငျ မစဉျးစားခငျြဆုံး ဖွဈမှာပါ။ နောကျကြ ကိစ်စမရှုပျရအောငျ ကွိုတငျပွငျဆငျထားပါ။
သငျဟာ လိငျကိစ်စတကျကွှသူတဈယောကျဆိုရငျ ခွောကျလတဈခါ ဖျောပွပွီးရောဂါတှကေို စဈဆေးသငျ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ သငျ့မှာ ဆကျဆံဖကျ တဈယောကျထကျပိုရငျပါ။ အဖျောဆောငျထားဖို့လဲ သတိရပါ။
Previous: ယောက်ျားများအတွက် အဝတ်အစား
Next: ယောက်ျားတိုင်း သူတို့ အင်္ဂါနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ပြောတတ်ကြတဲ့ အလိမ်အညာ ၁၀ မျိုး